च्याम्पियन्स लिग: नयाँ सिजन आजबाट, पहिलो दिन कुन कुन क्लब खेल्दै छन् ? - हिमाल दर्पण
च्याम्पियन्स लिग: नयाँ सिजन आजबाट, पहिलो दिन कुन कुन क्लब खेल्दै छन् ?
युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजन मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ । गत सिजन कोरोना महामारीका कारण पोर्चुगलको लिस्वनमा भएको च्याम्पियन्स लिग यसपटक भने होम एन्ड अवेका आधारमा आयोजना हुनेछ ।
यसपछि बहुप्रतीक्षित बार्सिलोना र बायर्न म्युुनिखबीचको खेल हुनेछ । समूह ‘इ’ अन्तर्गतको खेल बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नाउमा हुनेछ । स्टार खेलाडी लियोनल मेस्सीबिना बार्सिलोनाले पहिलोपटक च्याम्पियन्स लिग खेल्न लागेको हो । अघिल्लो वर्ष बायर्नले बार्सिलोनालाई ८-२ गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो ।
यता, समूह ‘ए’ का भिल्लारियल र एटालान्टाबीच राति पौने १ बजे खेल छ । खेल भिल्लारियलको मैदानमा हुनेछ ।
समूह ‘जी’ अन्तर्गत लस र उल्फसबर्ग भिड्ने छन् । यस्तै, समूह ‘एच’ मा दुई खेल रहेको छ । माल्मोले युभेन्ट्सको सामना गर्नेछ । खेल माल्मोको घरेलु मैदानमा हुनेछ । अन्तिम खेलमा चेल्सीले लन्डनमा जेनिटको सामना गर्नेछ ।
च्याम्पियन्स लिगको नतिजा : पिएसजी रोकियो, सिटी, लिभरपुल, रियल म्याड्रिड र डर्टमण्डको विजयी सुरुवात
युईएफए युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फुटबलको पहिलो चरणको खेलमा बलियो पेरिस सेण्ड जर्मन (पिएसजी) बराबरीमा
by Himal Darpan १ महिना अघि
युरोपियन क्लब फुटबलको सबै भन्दा ठूलो प्रतियोगिता च्याम्पियन्स लिग २०२१/२२ को समूह चरण विभाजन